Virus ရန်ကနေ ကာကွယ်ချင်တယ် ဆိုရင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » Virus ရန်ကနေ ကာကွယ်ချင်တယ် ဆိုရင်
Virus ရန်ကနေ ကာကွယ်ချင်တယ် ဆိုရင်
Posted by Alpha Vanishing on Sep 21, 2012 in Computers & Technology | 27 comments
Virus ရန်ကနေ ကာကွယ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အခုဖော်ပြမယ့် အချက်လေးတွေကို အထူးသတိထား ဖို့တော့ လိုပါတယ်….
(၁) Security Patch များကို Install လုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ Operating System အတွက် available ဖြစ်နေတဲ့ security patch အားလုံးကို ရယူဖို့နဲ့ install လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်… အကယ်၍ Windows 98 နဲ့ နောက်ပိုင်း Windows တွေမှာ MSIE နဲ့ Windows Update တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ Patch တွေကို Provide ပေးပေမယ့် Windows 95 နဲ့ အလားတူ system တွေအတွက် ကတော့ WindizUpdate ကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်… အရေးအကြီးဆုံးကတော့ အပတ်စဉ် updates တွေကို စစ်ဆေးပေးဖို့နဲ့ သင့်ရဲ့ Operation System အတွက်တွေ့ရှိထားတဲ့ အားနည်းချက်များနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ နောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်တွေကို ရရှိဖို့ မျက်စိဖွင့် နားစွင့် ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
(၂) Antivirus Software နဲ့ Adware Removal Tools တွေအပေါ်မှာပဲ အားကိုး အားထားမပြုပါနဲ့ Virus တွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် Antivirus Software တွေ Tools တွေကို သုံးတာဟာ ကောင်းတဲ့ သင့် Computer ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် ကောင်းသော အလေ့အကျင့်တခုပါ… ဒါပေမယ့် အဲဒီ Software တွေ Tools တွေအပေါ်မှာပဲ အားကိုးမနေသင့်ပါဘူး… Training နဲ့ Virus Awareness ရှိနေဖို့က ပိုအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်… သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ လူအများစုက ကိုယ့် Computer မှာ Antivirus Software ကို run ထားတယ်ဆိုရင် Antivirus က ကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ် ဆိုပြီး သတိမမူတော့ပဲ စိတ်ချလက်ချနေတတ်ကြပါတယ်… အဲဒါဟာ မှားတယ်ဆိုတာကို အောက်ပါ အချက်တွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိပါလိမ့်မယ်….
အကယ်၍ သင့် Antivirus ရဲ့ virus definition တွေဟာ ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်ကျော်သွားပြီး ဆိုရင် သင့်ရဲ့ Virus Scanner ဟာ အသုံးမ၀င်တော့ပါဘူး… ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အသစ်ထွက်တဲ့ Virus တွေကို detected မဖြစ်ပဲ ၀င်ခွင့်ပြုနေသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်…သင့်ရဲ့ ဖိုင်တွေကို remove လုပ်ဖို့၊ exit လုပ်ဖို့နဲ့ emails အမြောက်အမြားပို့ဖို့ အတွက် အလားအလာတွေ ရှိနေပါသေးတယ်… free antivirus program တွေမှာဆိုရင် အများအားဖြင့် တစ်လ တခါပဲ update ပေးပါတယ်… အဲလိုမျိုး software တွေကို ဘယ်တော့မှ မသုံးမပြုသင့်ပါဘူး..
နောက်တစ်ခုက အသစ်ထွက်လာတဲ့ Virus တွေပြန့်နှံ့နေတဲ့ အချိန်နဲ့ အဲဒီ Virus တွေရဲ့ Virus definition တွေကို update ပေးတဲ့ အချိန် ( ဆိုလိုတာကတော့ update ကို သင်ရရှိတဲ့အချိန် ) ဟာ အမြဲလိုလိုပဲ နာရီပေါင်းများစွာ ကွာခြားနေတတ်ပါတယ်… အကယ်၍ သင့်ရဲ့ ISP ( Internet Service Provider ) က email တွေကို filter လုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်တောင် Virus အသစ်တွေကိုတော့ သင်ရရှိနေအုံးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်.. Virus တွေဟာ တစ်ခါတရံမှာ သင့်ရဲ့ Antivirus Software ကို disable လုပ်နိုင်ကြပါတယ်… Popular ဖြစ်နေတဲ့ Antivirus Program တွေကို သုံးမယ်ဆိုရင် Virus တွေက အဲဒီ Program ကို သိပြီး terminate လုပ်ပါလိမ့်မယ်…
သင့်ရဲ့ ISP က Virus protection လုပ်ပေးနေသည့်တိုင်အောင် Virus အကုန်လုံးကိုတော့ ရပ်သွားအောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ အရေးကြီးတာကတော့ Email Attachment တွေ မဖွင့်ခင် (သို့) Website ( or porn site) တစ်ခုကနေ Softwar တွေကို download မလုပ်ခင်မှာ သင့် browser ရဲ့ disk cache ကိုဖယ်ရှားပေးဖို့လိုပါတယ်… ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ website တွေ့ရဲ့ Viruses scan အများစုဟာ Email address ရဖို့အတွက် သင့်ဆီကို ရောက်လာတတ်ပါတယ်…
(၃) Internet Explorer , Mocrosoft Word ( သို့ ) Outlook Express တွေကို မသုံးပါနဲ့ လူသုံးအရမ်းများတဲ့ web browser တွေ၊ လူသုံးများတဲ့ word processor ( သို့ ) Windows Adress Book တွေကို အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး.. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Netsky virus ကို ဥပမာ တစ်ခုအနေနဲ့ ကြည့် ကြည့်ပါ။ ၄င်း Virus က သင့်ရဲ့ Computer ကို Email address တွေ ရဖို့အတွက် scan တွေဖတ်ပါတယ်…ဖိုင် အကုန်လုံးကို scan ဖတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး.. အောက်ပါ ဖိုင် types တွေကို scan ဖတ်ပါတယ်…
.OFT —– Outlook item template
.DOC —– Microsoft Word Document
.EMl —– Outlook Express email message
.WAB —– Windows Adress Book
.DBX —– Outlook Express email folder
.RTF —– Rich Text formet
.TXT —– Plain Text
ဒါကြောင့် အဲဒီ documents တွေထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ email address တွေကို ရယူပြီး Virus ကနေ mail တွေပို့ပါတယ်… ကောင်းတာကတော့ တခြား email program တွေနဲ့ အခြားအခြားသော word processor တွေကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်… Microsoft Word ကပဲ word processor အဖြစ် Available ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး MS ထက် ကောင်းတာတွေအများကြီး ရှိပါတယ်… ဥပမာ OpenOffice ကိုလည်း MS အစားသုံးလို့ရပါတယ်… ၄င်းက viruses scan တွေမဖတ်နိုင်အောင် ဖန်တီးထားပါတယ်… နောက်တစ်ခုကတော့ Microsoft ရဲ့ Internet Explorer ( IE ) browser ကိုလည်း အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ IE browser ဟာ မလိုအပ်တဲ့ features တွေကို user မသိပဲ (သို့) သဘောမတူပဲ အလွယ်တကူ ထည့်ပေးနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်.. ( ဥပမာ – search bar – Search bar တွေကို ဘာကြောင့် ကန့်သတ်သင့်လဲဆိုတော့ အဲဒီ software (search bar) က သင့် Computer မှာ သင်ရိုက်သမျှ key တွေ၊ သင် ၀င်ရောက်လည်ပတ်သမျှ website တွေ နဲ့ သင့်ရဲ့ Computer ကို အဝေးကနေအပြည့်အ၀ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ အတွက် အချက်အလက်တွေကို Central hacker ဆီကို ပို့ပေးဖို့အတွက် Adware တွေ Trojan တွေ အဲဒီ Search bar မှာပါဝင်တတ်ပါတယ်….) U.S government’s Computer Emergency Rediness Team ( US-CERT) ကနေ Microsoft’s Internet Explorer( IE) bowser အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်တန့်ဖို့သတိပေးထားပါတယ်.. Vulnerability Note မှာကြည့်ပါ…
(၄) File-Type တွေကလည်းသိထားဖို့လို့ပါတယ် Windows တွေမှာပါတဲ့ စိုးရိမ်စရာ အပြစ်တစ်ခုကတော့ file extension တွေကို ဖုံးကွယ်ဖို့ default setting ပါရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်… file extensions တွေဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်… ဘယ်တော့မှ hidden မလုပ်သင့်ပါဘူး… သင့်ရဲ့ computer မှာရှိတဲ့ ဖိုင်တွေကို အလွယ်တကူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးဖို့ နဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက် ဖိုင် တွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ icons တွေပြုလုပ်ထားပါတယ်… အများအားဖြင့်တော့ document ရဲ့ types အမျိုးမျိုးမှာ ကိုယ်ပိုင် icon တွေရှိကြပါတယ်… ဥပမယ်.. Adobe Acrobat file တွေမှာ သိသာစေတဲ့ icon တစ်ခုရှိပါတယ်… ဒါပေမယ့် အဲဒီ icon ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ Windows Executable file (.exe) ကို သတိထားမိချင်မှ ထားမိပါလိမ့်မယ်…ဒါ့အပြင် တခြား document တွေနဲ့ ဆင်တူနေတာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်… ဒါကြောင့် file types ကို တွေကို သိထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်… Extensions တွေကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်…အဲဒီ extensions တွေပါဝင်တဲ့ ဘယ်attachment မဆို virus လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်…
.BAT —– DOS batch file
.COM —– DOS executable file
.CMD —– Windows 2000 batch file
.CPL —– Control Panel extension
.HTA —– HTML application
.JS —– JScript
.JSE —– JScript Encoded Script
.LNK —– Shortcut
.MSI —– Microsoft installer database
.PIF —– Shortcut to DOS program
.REG —– Registary Entries
.SCF —– Windows Explorer command
.SCR —– Screen Saver
.VB —– VB Script
.VBE —– VB Encoded Script
.VBS —– VB Script
.WS —– Windows Script Host
.WSC —– Windows Script Host – Componet
.WSF —– Windows Script Host
.WSH —– Windows Script Host – Setting file
Windows Enhanced Mode Driver ဖြစ်ပါတယ်။ device driver ဟာ executable code ဖြစ်တဲ့အတွက် virus ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် scan ဖတ်သင့်ပါတယ်။
Microsoft Access Project Extension ဖြစ်ပါတယ်။ macro virus တွေက ၄င်းရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
Microsoft Access Project ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ extension ကိုလည်း macros တွေက အသုံးချနိုင်ပါတယ်။၏
Application File ဖြစ်ပါတယ်။ programအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ extension ဖြစ်ပါတယ်။ standalone program များနဲ့ ဆင်တူအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး database programများကို တုန့်ပြန်နိုင်ပါတယ်။
Active Server Page ဖြစ်ပါတယ်။ programတွေ၊ HTML code တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Microsoft Visual Basic Class Module ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းတို့ဟာ programတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Batch File တွေဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းတို့ဟာ system command တွေပါဝင်တဲ့ text fileတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ၄င်းတို့ထဲက အချို့ဟာ batch file virusတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် … ဒါပေမယ့် အကုန်လုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
Binary File ဖြစ်ပါတယ်။ task အမျိုးအမျိုးအတွက် သုံးပြုနိုင်ပြီး အများအားဖြင့် program တစ်ခုနဲ့ ဆက်စပ်နေတတ်ပါတယ်။ ထပ်လွှမ်းထားတဲ့ ဖိုင်တစ်ခုနဲ့ တူပြီး virus ကူးစက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
4DOS Batch To Memory Batch File ဖြစ်ပါတယ်။ Virus ပါဝင်တဲ့ Batch file ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Computer Based Training ပါ။ ၄င်းကို clear ဖြစ်အောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ၄င်း ကလည်း virus ကူးစက်နိုင်တဲ့ extension တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၄င်းတို့ရဲ့ default list ထဲမှာ Symantec ပါဝင်ပါတယ်။
Compiled HTML Help File ဖြစ်ပါတယ်။ scripတွေနဲ့ ၄င်းရဲ့ အားနည်းချက်ကို အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
Java Class File ဖြစ်ပါတယ်။ sandbox တစ်ခုထဲကနေ run ဖို့အတွက် suppose လုပ်နိုင်တဲ့ Java applet တွေဖြစ်ပြီး system ကနေခွဲထုတ်ထားပါတယ်။ sandbox က secure ကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်နိုင်တဲ့ mode တစ်ခုထဲမှာ run နေတဲ့ applet တစ်ခုထဲကို ပရိယာယ်ဆင်ဖို့အတွက် user တွေက ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Class file တွေကို scanဖတ်သင့်ပါတယ်။
Window NT Command Script ဖြစ်ပါတယ်။ NT အတွက် batch file တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Command(Executable File) ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်executable file မဆို နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ virus ပါဝင်နေနိုင်ပါတယ်။
Control Panel Extension ဖြစ်ပါတယ်။ executable code တွေပါဝင်တဲ့ device driver တစ်ခုနဲ့ ဆင်တူပြီး virus ပါဝင်နေနိုင်တဲ့အတွက် scan ဖတ်သင့်ပါတယ်။
Security Certificate ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းနဲ့အတူ virus code တွေ ပေါင်းစပ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
Corel Script File ဖြစ်ပါတယ်။ executable ဖြစ်တဲ့ script file ရဲ့ type တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ virus scan ဖတ်သင့်ပါတယ်။
Hypertext Cascading Style Sheet ဖြစ်ပါတယ်။ Style Sheet တွေထဲမှာ Virus code တွေပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
Dynamic Link Library ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းတာဝန်အမျိုးမျိုးကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး program တစ်ခုနဲ့ ဆက်စပ်နေတတ်ပါတယ်။အများအားဖြင့်တော့ DLL တွေဟာ function တွေကို programတွေဆီသို့ ပေါင်းထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ကတော့ executable code တွေပါဝင်နေပြီး များသောအားဖြင့် functionတွေ (သို့) data တွေ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် virus ပါ မပါဆိုတာကို မသိနိုင်တဲ့အတွက် scan ဖတ်သင့်ပါတယ်။
MS Word Document ဖြစ်ပါတယ်။ Word document တွေထဲမှာ macro virusတွေပါဝင်နေနိုင်ပြီး virus တွေနဲ့ wormတွေအတွက် အပြည့်အ၀ အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
MS Word Document Template ဖြစ်ပါတယ်။ Word Tamplateတွေထဲမှာလည်း macro virus တွေ ပါဝင်နိုင်ပြီး virus နဲ့ worm တွေအတွက် အပြည့်အ၀ အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
Device Driver ဖြစ်ပါတယ်။ device driver တစ်ခုဟာ executable code ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် virus ပါဝင်နေနိုင်ပြီး scan ဖတ်သင့်ပါတယ်။
MS Outlook Express E-mail ဖြစ်ပါတယ်။ E-mail message တွေမှာ HTML နဲ့ script တွေပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ virus နဲ့ worms အများစုက ဒီအားနည်းချက်ကို အသုံးချကြပါတယ်။
Font ဖြစ်ပါတယ်။ ယုံလို့လည်း ရတယ် မယုံလို့လည်း ရတဲ့ extension တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ font file တစ်ခုထဲမှာ executable code တွေရှိနေနိုင်တဲ့အတွက် virus ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
Help File ဖြစ်ပါတယ်။ Help File တွေထဲမှာ macro virus တွေပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ၄င်းတို့က အများအားဖြင့်တော့ virus မပါ ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Trojan တစ်ခု၊ နှစ်ခုတော့ ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။
HTML Program ပါ။ scriptတွေ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
Hypertext Markeup Language ဖြစ်ပါတယ်။ HTML file တွေဟာ ပိုပိုပြီး virus သယ်ဆောင်တဲ့ script တွေ ပါဝင်နိုင်ပါပြီ။
Setup Information ပါ။ Setup scriptတွေဟာ မျှော်လင့်မထားတဲ့ အရာတွေကို ပြုလုပ်ဖို့အတွက် ပြောင်းလဲနိုင်ကြပါတယ်။
Initialization File ဖြစ်ပါတယ်။ program option တွေပါဝင် ပါတယ်။
Internet Naming Service ဖြစ်ပါတယ်။ မျှော်လင့်မထားတဲ့ နေရာကို ညွှန်းပြပေးဖို့ ပြောင်းလဲနိုင်ကြပါတယ်။
Internet Communication Setting တွေဖြစ်ပါတယ်။ မျှော်လင့်မထားတဲ့ အရာတွေကို ညွှန်ပြဖို့အတွက် ပြောင်းလဲနိုင်ကြပါတယ်။
Library ဖြစ်ပါတယ်။ သီအိုရီအရတော့ ၄င်း file တွေဟာလည်း virus ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုထိတော့ LIB-File virus တွေကို ဖော်ပြပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
Link ဖြစ်ပါတယ်။ မျှော်လင့်မထားတဲ့ နေရာတွေကို ညွှန်ပြဖို့အတွက် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
MS Access Database (သို့) MS Access Application ဖြစ်ပါတယ်။ Access fileတွေမှာ macro virusတွေ ပါဝင်နေနိုင်ပြီး virus တွေ၊ wormတွေက ၄င်းကို အပြည့်အ၀ အသုံးချနိုင်ကြပါတယ်။
Microsoft Access MDE database ဖြစ်ပါတယ်။ macro တွေ၊ scriptတွေက ၄င်းရဲ့ အားနည်းချက်ကို အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
MHTML Document ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းတို့က Web page ကိုသိမ်းဆည့်တဲ့ဟာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းတို့မှာ scriptတွေပါဝင်နိုင်ပြီး virus ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
MP3 Program ဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ် music file တွေက virus မကူးစက်နိုင်ပါဘူး…ဒါပေမယ့် .mp3 extensionတွေနဲ့ အတူပါတဲ့ fileတွေမှာ Windows (သို့) RealNetwork media playerတွေက အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူပြီး run နိုင်တဲ့ macro code တွေပါဝင်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမှန်တကယ် music file ရဲ့ အလွန်မှာ ကျယ်ပြန့်မှုတွေရှိပါတယ်။
Math Script Object ဖြစ်ပါတယ်။ Symantec အရတော့ ၄င်းတို့ဟာ database-related program file တွေဖြစ်ပါတယ်။
Microsoft Common Console Document တွေဖြစ်ပါတယ်။ မျှော်လင့်မထားတဲ့ နေရာကို ညွှန်ပြပေးဖို့အတွက် ပြောင်းလဲပေးနိုင်ကြပါတယ်။
Microsoft Windows Installer Package ဖြစ်ပါတယ်။ Virus code တွေ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
Microsoft Windows Installer Patch ဖြစ်ပြီး virus code တွေပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
Microsoft Visual Test Source File ဖြစ်ပါတယ်။ Source တွေပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
Relocatable Object Code ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်း fileတွေဟာ programတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။
Object Linking နဲ့ Embedding (OLE) Control Extension ဖြစ်ပါတယ်။Web page တစ်ခုကနေ download ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ program တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Program File Overlay ဖြစ်ပါတယ်။ progarm တစ်ခုနဲ့အတူ လုပ်ငန်းတာဝန်အမျိုးမျိုးကို ပြုလုပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ Overlayတွေဟာ functionတွေကို programတွေဆီသို့ ပေါင်းထည့်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။Overlay fileတွေမှာ virus ပါဝင်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်တော့ မပါ ပါဘူး။
Photo CD MS Compiled Script ဖြစ်ပါတယ်။ Scriptတွေဟာ အားနည်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
Program File ဖြစ်ပါတယ်။ program အမျိုးအမျိုးနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ standalone program များနဲ့ ဆင်တူအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး database programများကို တုန့်ပြန်နိုင်ပါတယ်။
MS-DOS Shortcut ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းကို ပြောင်းလဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ မျှော်လင့်မထားတဲ့ programတွေ အဖြစ် run နိုင်ပါတယ်။
MS PowerPoint Presentation ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းထဲမှာ macro virus တွေပါဝင်နေနိုင်ပြီး virus တွေ၊ warmတွေက ၄င်းကို အပြည့်အ၀ အသုံးချနိုင်ကြပါတယ်။
Palmpilot Resource File ဖြစ်ပါတယ်။ PDA program တစ်ခုဖြစ်ပြီး ရှားရှားပါ PDA virus တွေရှိနေနိုင်ပါတယ်။
Registry Entryတွေဖြစ်ပြီး ၄င်းကို runလိုက်မယ်ဆိုရင် Registry ကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
Rich Text Format ဖြစ်ပါတယ်။ text တွေကို formatပြုလုပ် ရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့အတွက် format တစ်ခုဖြစ်ပြီး အများအားဖြင့်တော့ ယုံကြည်နိုင်ပါတယ်။ virus ပါဝင်တဲ့ Binary object တွေဟာ RTF file တွေကြားထဲမှာ နစ်မြုပ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် scan ဖတ်သင့်တဲ့အထဲမှာ ပါ ပါတယ်။RTF ဖိုင်တွေဟာ DOC file တွေကို rename ပေးနိုင်ပြီး Word က ၄င်းတို့ကို DOC fileတွေကဲ့သို့ ဖွင့်ပါတယ်။
Screen Saver (သို့) Script ဖြစ်ပါတယ်။ Screen Saverတွေနဲ့ Scriptတွေ နှစ်ခုစလုံးက executable code တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် virus တွေပါဝင်နေနိုင်သလို warm (သို့) Trojan တွေထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။
Windows Script Component ဖြစ်ပါတယ်။ Scriptတွေဟာ virus ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
Shell Scrap Object File ဖြစ်ပါတယ်။ scrap file တစ်ခုမှာ ရိုးစင်းတဲ့ text file ကနေ စွမ်းအားပြည့်ဝတဲ့ executable file တွေအထိပါဝင်နိုင်ပါတယ်။တခြားတစ်ယောက်ကနေသင့်ဆီကို ပေးပို့ခဲ့မယ်ဆိုရင် အများအားဖြင့်တော့ ၄င်းတို့ကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ single systemတွေပေါ်မှာ operation system အားဖြင့် အသုံးပြုကြပါတယ်။
Ami Pro Macro Rare ဖြစ်ပြီး virus ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
Source Code တွေဖြစ်ပါတယ်။ program file တွေရှိကြပြီး source code virus အားဖြင့် virus ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။(ဒီလိုကူးစက်တယ်ဆိုတာ ရှားတော့ ရှားပါတယ်။) သင်ဟာ programmer တစ်ယောက် မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တောင်မှ စိုးရိမ်စရာတော့ မလိုပါဘူး။ Extensionတွေပါဝင်ပြီး .ASM, .C , .CPP, .PAS, .BAS, .FOR ပဲဖြစ်ရမယ်လို့တော့ ကန့်သတ်ချက်မရှိပါဘူး။
System Device Driver ဖြစ်ပါတယ်။ device driver ဟာ executable code ဖြစ်တဲ့အတွက် virus ကူးစက်နိုင်ပါတယ်…ဒါကြောင့် scan ဖတ်သင့်ပါတယ်။
Internet Shortcut ဖြစ်ပါတယ်။မလိုလားအပ်တဲ့ Web location တွေဆီသို့ သင့်ကို ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
VBScript File ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Scriptတွေဟာ virus ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။(.VBE ဟာ encode ဖြစ်ပါတယ်။)
Visual Basic Script ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ script file တွေမှာ virus ပါဝင်နိုင်သလို warm (သို့) Trojan တစ်ခုကိုလည်း ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။
Virtual Device Driver ဖြစ်ပါတယ်။ executable code တွေဖြစ်တဲ့အတွက် virus ကူးစက်နိုင်ပါတယ်…scan ဖတ်ပါ။
Windows Script File ဖြစ်ပြီး virus ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
Windows Script Host Settings File ဖြစ်ပါတယ်။ Settingတွေဟာ မျှော်လင့်မထားတာတွေကို ပြုလုပ်ဖို့အတွက် ပြောင်းလဲနိုင်ကြပါတယ်။
MS Excel File ဖြစ်ပါတယ်။ Excel Worksheet တွေမှာ macro virus တွေပါဝင်နေနိုင်ပြီး virus နဲ့ wormတွေက ၄င်းတို့ကို အပြည့်အ၀အသုံးပြုနိုင်ကြပါတယ်။
ဒါအပြင်လည်း .EXE file အနေနဲ့လည်း ရှိပါတယ်… ဒါပေမယ့် virus မဟုတ်တဲ့ executable files တွေလည်း ရှိနေတော့ သတိတော့ထားဖို့လိုပါတယ်…အကယ်၍ email တွေကနေပို့တဲ့အခါ ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိဘူး ဆိုရင် မဖွင့်ပါနဲ့… ပြီးတော့ ဘယ် OLE document ( OLE document တွေမှာ Word and Excel documents တွေပါဝင်ပါတယ် ) မဆို viruses ပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့… နောက်သတိထားရမယ့် extension တစ်ခုကတော့ .ZIP ပါ။ အဲဒီထဲမှာ compressed files တွေပါဝင်ပါတယ်… ZIP file တွေက သူတို့ထဲမှာ ပါတဲ့ file ရဲ့ extensions တွေကို ဖုံးကွယ်ပေးဖို့ အသုံးဝင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်… ဒါပေမယ့်လည်း ZIP လုပ်ထားတဲ့ Viruses တွေရဲ့ file names တွေမှာ အမှန်တကယ်ဖိုင်ရဲ့ extension ကို မသိနိုင်ဖို့အတွက် spaces hoping အများကြီးရှိတတ်ပါတယ်။ ( ဆိုလိုတာကတော့ file name မှာ (“…”) ပါဝင်တာကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်…)
(၅) E-Mail ဖွင့်ကြည့်ရင် သတိထားပါ ကိုယ်နဲ့ မသိတဲ့သူတွေဆီက mail တွေကို ဖွင့်မဖတ်မိအောင် သတိထားဖို့လွယ်ပေမယ့် တခါတရံ ကိုယ်နဲ့ သိတဲ့သူတွေဆီက virus ပါတဲ့ mail တွေကို သတိမပြုပဲဖွင့်တတ်ကြပါတယ်… အောက်မှာပြထားတဲ့ အချက် (၄) ချက်ကြောင့် သင်နဲ့ သိတဲ့သူတွေရဲ့ နာမည်နဲ့ viurs ပါတဲ့ Mail တွေရောက်လာနိုင်ပါတယ်….
ဒါကြောင့် တခြားသူတစ်ယောက်ကနေ E-mail ကို attachment နဲ့ လိုက်တဲ့အခါ attachment နဲ့အတူပါလာတဲ့ E-mail ရဲ့ body ကို သတိထားကြည့်ဖို့လိုက်ပါတယ်… နောက်ပြီး Message headers ကိုလည်း သတိထားရပါမယ်… ဒါပေမယ့် တခါတရံမှာတော့ information အတုအယောင်တွေလည်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် … အများအားဖြင့်တော့ delivery route တွေက ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်…။
အဲဒီအပေါ်က ဟာ Pro Ver နဲ့.. မိုက်ကခရိုဆော့ဖ်ရဲ့.. Security Essentials တွဲသုံးတယ်…
ကျန်တဲ့.. အန်တိုင်ဗိုင်းရပ်စ်ဆော့ဝဲလ်တွေက.. ကွန်ပျူတာလေး,ကျသွားတာကြောင့်.. မကြိုက်လို့..
ယူအက်စ်နေ မြန်မာများ..အောက်ကသတင်းအရ.. ဘဏ်အသုံးပြုရင်သတိထားကြဖို့ဖြစ်ပါကြောင်း..
JPMorgan Chase is second U.S. bank in two days with issues … alert for cyber attacks after Bank of America and JPMorgan Chase experienced …
Thu Sep 20, 2012 5:25am IST
Sept 19 (Reuters) – A financial services industry group warned U.S. banks, brokerages and insurers on Wednesday to be on heightened alert for cyber attacks after Bank of America and JPMorgan Chase experienced unexplained outages on their public websites.
The Financial Services Information Sharing and Analysis Center, which is widely known as FS-ISAC, raised the cyber threat level to “high” from “elevated” in an advisory to members, citing “recent credible intelligence regarding the potential” for cyber attacks as its reason for the move
အန်တိုင်ဗားရပ်စ် ပဒိုဂဒမ်ကြောင့် ကွန်ပျူတာ လေး,ကျ မသွားအောင် အကျန်ပေးရရင်တော့
၁-မိုးပျံပူပေါင်း အလုံးတစ်ရာခန့် ကို မိမိသုံးမည့် ကွန်ပျူတာဖြင့် တွဲလျက်ချည်နှောင်ထားခြင်း
၂-ကွန်ပျူတာအား သံဇကာဖြင့် လေးဘက်လေးလံ အပေါ်အောက် ကာရံ ပေးထားခြင်း တို့ ဖြစ်ပါသည်
ကျော်လဲ သဂျီးဦးခိုင်လိုပဲ အေဗွီဂျီ ဖဒီးနဲ့MSE တွဲသုံးတယ်
အနှစ်နှစ် အလလက တိုလျှို ဘတ်ခဲ့တဲ့ ခရက်ဖိုင် ကီးဂျန်နဲ့ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို တစ်လှည့်စီ ၀ိုင်းဖျက်တယ်
*.html နဲ့.dll တွေဖျက်တယ်
တစ်ခါတလေ ပြိုင်တူ လုပြီးဖျက်တယ်
အန်တိုင်ဗားရပ်စ် က သူ့ ကို ပုံမှန် အပ်ဒိတ် မကျွေးလို့ဆိတ်ဆိုးပြီး ဖျက်တဲ့အဖျက်က ဂျီတော့နဲ့ မော်ဇီလာတောင် အလွတ်မပေးလို့မနဲ ချော့ပြီး သုံးနေရတယ်
MSE က တစ်ပတ် နှစ်ပတ် လောက် အပ်မဒိတ်ရင်ရှော့ခ်ရှိတယ်
ပိုက်ဆံချမ်းသာရင် အေဗွီဂျီ ၀ယ်သုံးချင်တယ်
သုံးရတာ ပေါ့လို့ 
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ security အတွက် ဘာတွေ တင်ထားသင့်လဲလို့မေးရင်တော့ အနည်းဆုံး4မျိုး တင်ထားရပါမယ်။
၁။ kaspersky internet security 2012
(၀ယ်ရန်မလို key များကို နေ့စဉ် update အလကားကျွန်တော် ဝေမျှပေးနိုင်ပါသည်)
၂။ ZoneAlarm PRO Firewall 2012
၃။ smadav 2012 တင်ထားပေးရပါမယ်။
(၀ယ်ရန်မလို user name , password တွေကို အလကားကျွန်တော်ဝေမျှပေးနိုင်ပါသည်)
၄။Trojan Killer and Trojan remover
ကျုပ်ကတော့ ခြံစောင့် တစ်ယောက်ဘဲ ထားတတ်တယ်ဂျ ..
Avast တစ်ခုတည်းကိုပဲ ကို ဖဒီး ယူပြီး သုံးတယ် …
လိုင်စင်ကီးကိုတော့ ၂၀၃၈ ထိ ရဒဲ့ဟာကို ရှာပြီး ဖြည့်ထားလိုက်ဒါပေါ့နော် ..
အဲ့ဒါဆို ပြီးရောပဲ …
Avast မစွမ်းလို့ လာကိုက်ပြီဆိုရင်ဒေါ့ ဘာမှ လုပ်နေဘူး ..
ပြတင်းပေါက် အသစ် ထပ်တပ်လိုက်တော့ဒါဘဲ ..
ဒါက ကျုပ်နည်း … အဟီးးးး
Avast virus definition update ကို ဘယ်လိုယူသလဲ..
ကျော့်ဆီမှာ ဖရီးကော အာတကေပေးရတာကော ဘယ်ဖိုင်မှ ဒေါင်းလို့ မရဘူး
တော်တော်များများလဲ Avast ကိုဒေါင်းလို့ မရတဲ့ error တက်နေလို့ ..ဆိတ်ဝင်စားလို့မေးကျိတာ
ဖရီးဒန်း နဲ့ သုံးကြည့် ..
ရိုးရိုးက ရတတ်ဘူး ..
အေဗက် ဆိုက်ကို ဖွင့်လို့ မရဒါ ..
ဖရီးဒန်းနဲ့ ဆိုရင်တော့ ရတတ်တယ် ..
ဒီမှာကျ.. လိုင်စင်မ၀ယ်ရင်.. ပြဿနာရှာလို့ရသမို့.. ၀ယ်ရမှာ..
အခုအတိုင်းဆို.. ကွန်ပျူတာတလုံးအတွက်.. အဲလောက်ဝယ်ရရင်..
အရမ်းကောင်းမဲ့ နည်းတွေ ထင်ပါတယ်
သို့ပါသော်လည်း တစက်လေးမှ နားမလည်တာမို့
ကဲ ရွာစားရေ မတိမ်းမစောင်း ဗိန်းဗေါင်း လေး ဗျ ။
ကွန်ပျူတာ နည်းပညာ နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပို့လေးတွေကို ရေးတင်ပေးတဲ့
အကိုတွေကိုတော့ အရမ်းပဲ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ဗျာ . . .
တစ်ခုလောက်ကူ ညီနိုင်မယ်ဆိုရင် ကွန်ပျူတာ Window တင်တဲ့နည်းလေးတွေကို
အသေးစိတ် ဖော်ပြပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ Lap top ကို Internal HDD မပါဘဲနဲ့ External HDD
နဲ့ Window တင်လို့ရမရ သိချင်ပါတယ်။ ကျနော်မှာဂျပန်ကျ Lap top အလုံး ၂၀ လောက်
အခုတင်.. Malwarebytes ကို လိုင်စင်တခု ၁၅ဒေါ်လာနဲ့ရတာမို့.. ရုံးအတွက် ၃ခုဝယ်လိုက်တယ်ခင်ဗျ..။
ပုံမှန်ဈေး $24.95 ဖြစ်လို့ပါ..။
$24.95 –> https://store.malwarebytes.org/342/purl-consumer?x-source=website&x-action=index_page
စိတ်ဝင်စားသူတွေ.. အောက်ကလင့်ခ်မှာ.. ဒေါင်းနိုင်ပါကြောင်း..
$14.95 –> https://store.malwarebytes.org/342/purl-winzip
ကျုပ်တို့ကတော့ ပိုက်ပိုက်နဲ့ဆို စိတ်ကို ဝင်စားဘူး ..
သိဒယ် မဟုတ်လား ..
ဖဒီး … ဖဒီးမှ …
ဒါပေမယ့်တစ်ကယ်အကူအညီလိုနေလို့ပါ.. ကျွန်တော်ဖုန်း LG Optimus L7 မှာ မြန်မာဖောင့်သွင်းနည်းရှာနေတာ ဘယ်လိုမှမရလို့ ကူညီပေးစေလိုပါကြောင်း.. ဖုန်းပြားပြားလေးကြိုက်မိလို့ ၀ယ်ပြီးကာမှ အင်တာနက်ကလဲ တွဲထားတော့ မြန်မာစာလေးတွေ ဖတ်ချင်နေတာ… ဘယ်လိုမှ မြန်မာဖောင့်သွင်းနည်းရော၊ အမြစ်တူးနည်းရောမသိတော့ ဒွတ်ခရောက်နေပါတယ်.. အရင် Galaxy တုန်းကတော့ ကိုယ့်ဖာသာ အိမ်သာပျက်ထဲ ၀င်မွှေလိုက်တာ လွယ်လွယ်လေးလုပ်လို့ရသွားပြီး ခုဖုန်းနဲ့ကျမှ အတော်လေးခက်နေတဲ့အတွက် ကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုက ကူညီပေးစေလိုပါကြောင်း..။
1st Myanmar Reader is Burmese Script (Zawgyi-One font) supported android RSS Reader.
[✔] automated feed updates
[✔] simplified URL entering
[✔] widget (n/a on apps2sd by android restrictions)
[✔] adjustable notifications
[✔] NO ads
[✔] NO search for feeds
[✔] OPML support
[✔] proxy support
[✔] feed sort
[✔] automated backups to SD card (unencrypted)
အပေါ်ကဟာကို..ဖုန်းထဲထည့်လိုက်ရင်.. အမြစ်တူးစရာမလိုပဲ.. ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေရဲ့.. ဇော်ဂျီ.. မြန်မာစာဖတ်လို့ရပါတယ်..။
LG Optimus L7 ကို အမြစ်တူးဖို့ အတွက်လိုအပ်ချက်များ-
-USB Debugging ကိုဖွင့်ထားပေးပါ
-Mass Storage mode ကိုဖွင့်ပါ
-V10A Firmware ဒါမှမဟုတ် Region Frimware V10A (http://www.lg-phones.org/official-lg-optimus-l7-firmware-download.html) ကိုဒေါင်းပါ
၁)LG Optimus L7 အတွက် USB driver (http://goo.im/devs/BGDonLINE/Usb_Driver)
၂)Lg_Optimus_L7_Root.zip ( http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1077018&d=1337704722 )ကိုဒေါင်းပြီးဇစ်ဖြုတ်ထားပါ
၃)Lg Optimus L7 Root.bat ကို ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပါ
၄ )root process ပြီးတဲ့အထိစောင့်ပါ
ကျော့် အတွက်လည်း 005SH Galapagos အမြစ်တူးနည်းပေးပါလား ဟင်
ှSharp ရဲ့005SH Galapagos အကြောင်းတော့ကျွန်တော်သိပ်မသိဘူးဗျ ဒါပေမယ့် ဒီကောင်က android ပဲသုံးတာဆိုတော့ လေ့လာကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်
SHARP SH72x8U ရဲ့ အမြစ်တူးနည်းလေးကို share ပေးလိုက်ပါတယ် 005SH Galapagos မှာလည်း ဒီနည်းနဲ့ အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်
ဒီ လင့်က unlockroot ကို ဒေါင်းလိုက်ပါ။
၁။root လုပ်ဖို့အတွက် မိမိရဲ့ဖုန်း driver ကိုကွန်ပျူတာထဲမှာအရင် install လုပ်ထားရပါမယ်။ ပြီးရင် ဖုန်းရဲ့ Setting>Application>Development > USB Debugging ကိုအမှန်ခြစ်ပေး(Enabled) လုပ်ထားပါ။ ပြီးရင်အခု download လုပ်ထားတဲ့ Unlock Root Tool ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ မိမိဖုန်းကို Unlock Root Tool က သိပြီး Auto Detect Message ပေးပါလိမ့်မယ်။
၂။Root လုပ်ဖို့အတွက် “Root” ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိ်ပ်ပါ။
၃။Rooting Process ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်တော့ မိမိဖုန်းကို Reboot လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။
၄။Boot ပြန်တက်လာပြီဆိုရင်တော့ မိမိဖုန်းထဲကိုကြည့်လိုက်ပါ။ Super User လို့ခေါ်တဲ့ ယုန်အရိုးခေါင်းပုံ icon လေးနဲ့ application လေး ရှိနေပြီဆိုရင် အဲဒီ Super User app ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။
၅။ Super User Request တောင်းလာပြီဆိုရင် Allow လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Root လုပ်တာအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
ခုတော့ တက်ဘလွတ် ပေါ်ဖစ်နေလို့
လက်ပကျွတ်သော်လည်းကောင်း. ပေါ်ရောက်တာနဲ့ စမ်းပါ့မယ်ဗျား
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ကိုအယ်လ်ဖာနဲ့ သဂျီးရေ.. ဒီနေ့ညမှပဲ သေသေချာချာ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်
မြန်မာစာမြင်ရမှပဲ စိတ်ချမ်းသာရမယ့် ဘွမို့ပါ
ကျုပ်ကတော့ ဖုန်းနဲ့ဆိုတော့ AVG ပဲထည့်ထားတာ
တခြားကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေ အလွယ်တကူဒေါင်းရတဲ့ဟာမျိုး ရှဲပေးပါဦး
Android ဖုန်းတွေအတွက် Kaspersky Mobile Security v9.10.125 for Android ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ Security ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအပြည့်အ၀အကာအကွယ်ပေးမယ့် app လေးပါ။ virus , malware တွေနဲ့ မ၀င်စေချင်တဲ့ဖုန်း call များ ၊ message များ ကိုပိတ်ပေးထားနိုင်သလို ၊ virus ဟုမင်္သကာဖွယ်ရာ application များကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလေးကို Google Play မှာ ၄.၉၅ ဒေါ်လာနဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီး အောက်က လင့် မှာတော့ free download ရအောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်
ကို အယ်လ်ဖာ ရေ..အင်မတန် ဗဟုသုတ ရပါတယ်ခင်ဗျာ..
စကားမစပ် အန်းဒွိုက် နဲ့ ပက်သက်လို့ စာအုပ်ကလေး တစ်အုပ်
ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အင်မတန်ရှာရခက်နေလို့..ကိုအယ်လ်ဖာ
များ ကူညီနိုင်မလား မသိ..။XDA Developers’ Android Hacker’s Toolkit:
The Complete Guide to Rooting, ROMs and Theming ဆိုတဲ့ စာအုပ်
ပါပဲ။ ကျေးဇူး တင်လျက်။
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်ဆီမှာလည်း အဲဒီစာအုပ် မရှိသေးပါဘူး Amazon မှာတော့ တွေ့ တယ် အလကားရအောင်ကြိုးစားကြည့်ပေးမယ် ရရင် share လိုက်ပါ့မယ် ။ အချိန်တော့ နည်းနည်းပေးရမယ်နော်။
စောင့်မျှော်နေမယ်နော .. :hee:
ငါမေး ထားတာ လီးထဲရောက်သွားလကွာ။
ကြီးကြီး ငယ်ငယ် ကွန်ပျူတာနဲ့မကင်းနိုင်၊ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာပို့ စ်လေးပါ အသေးစိတ် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရှင်းပြထားသည်မို့ကြိုက်မိပါတယ်။